U-Aylin Selamet | Law & More B.V.
U-Aylin Selamet ungumuntu oqhutshwayo onomqondo ophakeme wokuzibophezela. Akakwazi ukuma ezimeni ezingenagunya futhi ngenxa yaleso sizathu enza kakhulu ukusiza amaklayenti. U-Aylin ubuye afise ukuvelela. Kungumgomo wakhe ukusiza iklayenti ngendlela engcono kakhulu, ngaphandle kokulahlekelwa izintshisekelo zeklayenti. Ngaphezu kwalokho, uyathinteka futhi unomusa. Uzwa ukuthi kubalulekile ukunakekela izintshisekelo zamakhasimende, usebenzisa indlela yomuntu siqu ukuze amaklayenti angazizwa 'ngenombolo'.
Kungakapheli Law & More, U-Aylin usebenza kakhulu emkhakheni wezomuntu siqu nowomndeni, umthetho wokuqashwa kanye nemithetho yokufuduka.
Esikhathini sakhe sokuphumula, u-Aylin uthanda ukuya ezitolo ayokwenza uhambo lwedolobha. Uyakujabulela nokuchitha isikhathi nomndeni wakhe nabangane futhi uyakujabulela ukuphuma uyodla isidlo sakusihlwa.
kuqhutshwa - kuthathwa isixazululo - umuzwa wokuzibophezela